Mombamomba ny orinasa - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Niorina tamin'ny taona 2012, ny orinasa dia misahana manokana amin'ny famokarana lohan-dosy fampiasa antonony sy ambony, lohan-daboara LED, efitrano fandroana fandroana, efitrano fandroana, takelaka fandroana, faucet, efitrano fandroana, fitaovana fidiovana, sns
Manana antoka rafitra manarona fikarohana sy ny fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, kalitao fanaraha-maso, sy Ankehitriny-varotra tolotra.
Ny vokatra dia alefa any Eropa, Etazonia, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, sns raha toa kosa ka ny orinasa dia mpiara-miasa OEM amin'ny marika fidiovana marobe malaza eran-tany.
Mifantoka amin'ny famokarana vokatra salantsalany sy ambony, ny orinasa dia mametraka ny kalitao alohan'ny habetsahana ary efa hatokana ho an'ny fampandrosoana ny lanjan'ny marika manokana miaraka amin'ny tanjona ho tonga tsara indrindra amin'ny indostrian'ny fanadiovana vy tsy misy fangarony.
Izy io dia manolo-tena amin'ny fananganana trano fandroana "Tsara tarehy, ambony naoty, sariaka amin'ny tontolo iainana, mahasalama ary maharitra" ary natokana ho an'ireo izay manaraka fandroana mahafinaritra sy mankafy ny fiainany.Miaraka amin'ny vokatra Chengpai, azonao atao ny manana ranon'orana manarona ny lanitra maizina mba hanamaivanana ny havizanao amin'ny andro amin'izay tianao. Ankafizo fotsiny ny fandroana Chengpai mahafinaritra sy ekena ary miala sasatra amin'ny fahafinaretana!
Chengpai dia manana fenitra hentitra amin'ny fisafidianana akora. Ny takelaka vy tsy misy fangarony rehetra dia vita amin'ny vy vy 304 ary tsy misy firamainty, chromium, firakotra elektrôlika, zavatra misy poizina ary loto. Mahasalama sy tsy misy poizina, ny vokatra dia mamonjy angovo ary mahafeno ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana an'ny firenena eropeana sy Etazonia.
Miorina amin'ny fitsipiky ny fiasa tsy fivadihana sy ny fiaraha-miasa mandresy fandresena, niditra tao amin'ny magazay lehibe fivarotana any China sy any ivelany i Chengpai. Ny vokatra dia hita ao Hamburg, Milan, London, Florida, Canada, France, Belzika, Moyen Orient, ary ireo firenena any Azia atsimo atsinanana.